Apple Inopemberera Pride Parade neRainbow Straps | IPhone nhau
Sezvazvakaita gore rapfuura, Apple yaive chikamu che Kuzvikudza Paradhiso yeSan Francisco yakaitwa nezuro ndokutenda vashandi vakapinda chiitiko ichi nechipo chidiki: a muraraungu ane tambo ine tambo yeApple Watch. Tambo yacho yakagadzirwa nenylon uye inoita kunge isiri yakanyanya kushanda pane ese maApple Watch tambo, asi inokodzera zvakakwana muapuro smartwatch nenzira yakafanana neiyo Sport tambo.
ari vashandi veapuro Vaya vakapinda muchiitiko ichi vakagamuchirawo tsamba yekutenda mavakatsanangura pfungwa iri seri kwetambo iyi, yakashomeka shanduro yekuwedzera iyo, zvinoita sekunge isingawanikwe kutengwa muApple Chitoro, ndiko kuti, Vashandisi havazo kukwanisa kuitenga kuti uiise pane yedu Apple Watch.
Apple Inopemberera San Francisco Pride Parade
Apple yekutanga yeDhiversity Network Association, Pride, inoshandura makumi matatu gore rino uye tinofara kupemberera budiriro iyi newe! Mukucherechedzwa kwemunhu wese akanyoresa kutora chikamu muchiitiko cheKudada gore rino takagadzira chakakosha.
Iri rakatemerwa edition tambo mucherechedzo webasa redu rekuenzana uye tinovimba unoipfeka nekudada.
Vamwe vatungamiriri veApple, senge CEO Tim Cook, vakapinda muchiitiko chegore negore sechiratidzo chekambani yeapuro yakaramba ichitsigira iyo kuenzana uye kusiyana. Vamwe vashandi vakagovana mimwe mifananidzo pasocial network, senge iri pamusoro peichi chinyorwa.
Anofara Kuzvikudza kune wese munhu akabuda vhiki ino kuzopemberera! #applepride # kudada2016 pic.twitter.com/3GZlc9s6bl
- Tim Cook (@iku_cook) June 26, 2016
Anofara Kuzvikudza kune wese munhu akabuda vhiki ino kuzopemberera!
Zvisinei nezvazvinoreva, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti, kana yapfekwa, tambo inotaridzika kunge yakanaka. Zvinosuruvarisa kuti vashoma edition. Tichazombovaona muApple Chitoro?
ONA: zvine musoro, chero chirevo chinogumbura zvishoma kune vashoma chinobviswa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Apple Inopemberera Pride Parade neRainbow Apple Watch Tambo dzeVashandi
Zvakanaka tarisa, netariro! Ini ndaizoda rundarira kupemberera Pride izvozvi kuti Madrid iri kuuya pasina
Mapikicha akafuridzirwa neBreathe app kubva kuwatchOS 3